Q मुखमैथुन सेक्स भनेको के हो ? मुख मैथुनको बेलामा के सावधानी अपनाउन सकिन्छ ?
मुखमैथुन सेक्स भनेको एउटा यौन साथीको मुख र अर्को यौन साथीको यौनाङ्ग समावेश हुने कुरा हो । यसमा चाट्ने जस्तो पक्षहरू समावेश हुन्छन् । तपाईंलाई तपाईंको यौन साथी कुनै पनि एस.टी.डी.बाट मुक्त छ भन्ने थाहा छ भने मात्र यो सुरक्षित हुन्छ अन्यथा त्यहाँ संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ ।
Q मेरो बच्चाले एक बोतल खोकीको झोल औषधि पुरै खायो । यसबाट उसको शरीर र अनुहार सुन्निने जस्ता केहि प्रतिक्रियाहरू देखा पर्यो, कृपया के गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ।
तपाईंको बच्चालाई औषधिको ओभरडोज वा बढि मात्रा भएको छ । तपाईं बोतल साथमा बोकेर तुरुन्तै अस्पतालमा जानुहोस् । कुनै ढिलाई भएमा बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ ।